Inona no tsy mety amin'ny karatry ny orinasanao? | Martech Zone
Ny karatra fandraharahana dia fanazaran-tena mahafinaritra ahy foana. Hafa foana ny zavatra nataoko tamin'ny karatry ny orinasako - ny ahy aloha karatra fitorahana bilaogy miaraka amin'ny sariko, avy eo fonosana Fanamarihana PostIt, ary vao haingana indrindra dia karatra kely misy dispenser avy ao amin'ny Zazzle.
Androany aho nijery teleseminar an'i Alex Mandossian ao anatin'ny andiam-pampianarana orinasa anaovako anarana ary nanondro fotoana tsara iray izy navelako halaina… karatra fandraharahana telo misesy!
Ny fahamarinana sasany momba ny karatra fandraharahana
Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahatadidy ilay olona niavian'izy ireo.
Ny ankamaroany dia hariana fotsiny. Nandoa vola ianao izay tsy dia misy tambiny amin'ny fampiasam-bola!
Amin'ireo olona mitandrina azy ireo dia vitsy dia vitsy no voatsikera… matetika satria tsy misy antony tokony anaovana izany!
Inona no azo hatsaraina amin'ny ny ny karatro?
Apetraho amin'ny karatrao ny sarinao. Io dia hahafahan'ny olona mahatadidy hoe iza ianao!
Nilaza i Alex fa tokony ampidiro ny kolikoly etika. Raha atao teny hafa, misy zavatra ao amin'ny karatrao azonao omena ve izay hitarika ny olona iray handray andraikitra? Ny ohatra nomeny dia isa 1-800 miaraka amina hafatra efa voarakitra mialoha. Tsy miankina amin'ny tena izy ary azo antoka… ary afaka mandray soa amin'ilay hafatra ilay olona miantso azy.
Ampidiro ny hafatra namboarina ho an'ny hetsika natolotrao azy. Raha any amina hetsika tambajotra ianao dia manafata karatra vitsivitsy amin'ireo hetsika ireo. Raha miteny amina hetsika iray ianao dia ampidiro ny hetsika! Raha any amin'ny kaonferansa ianao… apetraho ny kaonferansa. By manamboatra ny karatra tamin'ny hetsika dia nanome a ny mpandray ianao a sora-baventy kely hanasana azy ireo hifandray ary koa hanome singa virtoaly. Rehefa mizara karatra 500 i Alex dia mahita fitsidihana 2,000 amin'ny tranokalany sy ny nomeraon-telefaony izy. Singa virtoaly mahafinaritra izany!
Saika hanafatra andiana taratasin'ny orinasako hafa aho ary hampiditra ireo torohevitra ireo. Hanampy ny sariko (sento!), Hampiditra rohy mankany amin'ny fisintomana maimaimpoana miaraka amin'ny torohevitra sy torohevitra vitsivitsy aho, ary hanoratra mialoha hafatra tsara kokoa ao amin'ny Google Voice miaraka amina fanontaniana napetraka matetika momba ny raharaham-barotra.
Ampahafantaro ahy raha liana ianao amin'ny andiam-pandraharahana misoratra anarana. Somary mandoa vola io, fa raha mahazo fifanarahana tokana aho amin'ny fanomezana karatra fandraharahana, dia handoa ny andiam-pandraharahana iray manontolo… ary eo amin'ny horonantsary voalohany fotsiny aho. Nahazo dera marobe tamin'ireo karatra nataoko tato ho ato aho - saingy tsy afaka milaza aho fa nanjary virtoaly izy ireo na nahatonga ahy ho mpandraharaha!
Tags: vinavina amin'ny fandaniana dokafandaniana doka amin'ny facebookfandaniana doka amin'ny finday facebookgoogle miampy fandaniana dokafamolavolana Sarysehatrarahona marketing ho an'ny mpivarotrafandaniana doka ara-tsosialyfandaniana doka twitter
Mahaiza tsara mahita ny valiny
Sep 10, 2009 amin'ny 12: 31 AM
Alex Mandossian no lehilahy! Andraso mandra-pijerenao ilay horonan-tsary izay manazava tsikelikely ny fomba fampandehanana teleseminar. Be dia be ny olona diso hevitra!!
Sep 10, 2009 amin'ny 2: 12 AM
Maniry aho ny hanonona ny loharanoko, Doug, saingy tsy tadidiko hoe taiza no namakiako an'ity, taloha ela be: ny karatra fandraharahana misy ny sarinao dia 50% tsy azo ariana any anaty fako. Angamba misy olon-kafa afaka manamarina izany.
Sep 10, 2009 amin'ny 3: 34 AM
Tsy hisalasala aho ry Bob! Ary ny orinasa sasany dia mandany kely amin'ny karatra fandraharahana - tsy mahafantatra ny sandan'izy ireo raha toa ka nampiasaina tanteraka.
Sep 10, 2009 amin'ny 3: 48 AM
Tsarovy fotsiny fa tsy ny fanaovana ny karatrao ho tsy hay hadinoina akory. Izany dia momba ny fahazoana vinavina handray ACTION rehefa mody na miverina any amin'ny birao.
10 Septambra 2009 à 2:09
Tsara, ry Patric!
Sep 10, 2009 amin'ny 2: 18 AM
Tokony hampiasainao ny fiaramanidina taratasy toy ny toetran'ny logo anao amin'ny karatrao. Angamba ny karatrao manontolo no ho logo anao amin'ny fijerena voalohany fa rehefa mivelatra izy dia manana ny fampahalalana voalazanao ao amin'ny lahatsoratra etsy ambony. Mety ho sarotra ny manao izany saingy azo antoka sy azo antoka.
Sep 10, 2009 amin'ny 3: 33 AM
Tena hevitra tsara izany ry bcreative! Mety hijery tsara ny hanao zavatra miaraka amin'io hevitra io aho amin'ny ho avy. Misaotra!
Sep 10, 2009 amin'ny 3: 40 AM
Tsidiho i Doug ny avatar tsy mitonona anarana, karazana mandeha amin'ny bilaogy 🙂 Niditra tamin'ny Twitter aho ary manana avatar Twitter izay sarin'ny tenako manontany tena hoe nahoana no tsy nipoitra ilay izy
@bcreative – nalaina tao amin'ny gravatar.com ny sary – mahazo iray! 🙂
Mar 1, 2011 ao amin'ny 3: PM PM
Ny fahatsapana ankapobeny amin'ny voalohany dia hita fa seam tsy vita. Heveriko fa hanampy bebe kokoa ny asa eo amin'ny lafin'ny typography sy ny fiaviana maranitra kokoa. Tsy afaka miteny izay hovaina fa manontany hevitra fotsiny.